पार्टी खोल्न आयोगमा दौडादौड «
थ्रेसहोल्डको प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निर्माण गर्ने साना ६ राजनीतिक दलहरूमा परेको देखियो । उनीहरू एक भए र देशको राष्ट्रिय राजनीतिक मैदानमा चौथो ठूलो दलको रूपमा हैसियत कायम गरे । गत निर्वाचनको परिणामबाट अपेक्षा गरिएको नयाँशक्ति पार्टी, साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीको स्थान सुनिश्चित हुन नसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा सक्रियहरूको सुझावमा सकारात्मक विवेक प्रयोग गरी साझा विवेकशील पार्टी बन्न पुग्यो ।
चुनावअघि नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पार्टी एकता गरेरै जानेसम्मको प्रतिबद्धता गरी अगाडि बढेका थिए । जनताले भनेजस्तै यी दुई चुनावपछि एक हुन्छन् भनेर यी पार्टीलाई जिताइदिए र नेपाली कांग्रेसलाई खुम्चाइ दिए । चुनावपछि एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै दलले पार्टी एकीकरण गर्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् भने त्यो एकतालाई हुन नदिन नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषित रणनीतिको रूपमा अघि बढाइरहेको त्यस पार्टीका नेताहरूको अभिव्यक्तिले स्पस्ट पार्छ । कांग्रेस नेताहरूको पार्टी एक हुन नदिन प्रयास भइरहँदा चुनाव अघि पूर्वउप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीलाई कांग्रेसमा मिसाइएको थियो । गच्छदारलाई पार्टीमा भनेबमोजिमको हैसियतमा पु¥याउन नसकेको गुनासो उनी निकटहरूले गर्न थालेका छन् । पार्टीमा गच्छदारको असन्तुष्टि व्यक्त भएको समाचार सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
गच्छदारले पार्टी एकीकरण गर्दा कै बखत एकथरी असन्तुष्ट थिए पनि हाल आएर पनि केही असन्तुष्ट हुन थालेका छन् । यस्तै, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि पनि केही राजनीतिककर्मीहरूले पार्टीबाट अलग हुन सक्नेछन् । सम्भावित यस्ता राजनीतिक समूहहरूसँग समन्वयगरी आयोगमा राजनीतिक पार्टी दर्ता गर्ने काम फेरि सुरू भइसकेको छ ।
आयोगले हाल पाँच÷पाँच पार्टीहरूको कामलाई पूरा गरी लट बनाएर दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको छ । तत्काल चुनाव पनि नभएकाले पार्टी दर्ता प्रक्रियालाई आयोगले यसैगरी नै आगाडि बढाइरहेको पार्टी दर्ता गराउनेहरूले जनाए ।
गच्छदारसँग नजिक भएका एक पूर्वसांसदले हाम्रा सहयोगीहरूले आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाए । नाम नखुलाउने शर्तमा तिनले भने “कांग्रेसले नै भने बमोजिमको विश्वास दिलाए भइगो नभए अर्कै दल खोल्नु परे त्यही दल आफ्नो हुनेछ ।”
संविधानसभामा प्रवेश पाएको, थरूहट तराइ पार्टी नेपाललगायतका दललाई मिसाएर गच्छदारले नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी बनाएका थिए । कांग्रेसमा मिसाए पनि त्यो पार्टीलाई पुनर्जिवित गराउन तत्कालीन थरूहट पार्टी नेपालका अध्यक्ष भानुराम थारूले नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल दर्ता गराउन सक्रिय छन् । गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)को चुनाव चिह्न नमस्ते माग दाबी गर्दै थारूले पार्टी दर्ता गराउन लागेका हुन् । उनका अनुसार आयोगले फ्रिज गरेको चुनाव चिह्न एक वर्षभित्र कसैलाई दिन नमिल्दैन् । त्यसैले हामीलाई नमस्ते चुनाव चिह्न दिन आयोगले नमानेको उनले जनाए ।
साना दलका नेताहरूलाई राजनीतिक पसल थाप्ने गरेको आरोप लगाउने गरिन्छ नी ! भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा थारूले भने, “राजनीतिमा विचारको बहस र छलफल हुन्छ । हामीले छलफलका आधारमा गच्छदार लगायतका दलसँग एकीकरण गर्यौं । तर त्यसअनुरूप हुन नसकेपछि उत्पीडित जनताको आवाज र एजेन्डालाई अगाडि बढाउन पार्टी दर्ता गर्नै पर्यो ।”
थारूले राजनीतिक पसल नथापेको दाबी गरे पनि उनीसँग पार्टी दर्ता गराउन पुगेका अर्का एक जनाले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “राजनीतिक पसल खोलेर फाइदा भएसम्म पसल त खोलिरहन्छ नी ! राजनीतिमा सबै प्रधानमन्त्री बन्नु पर्छ भने होइन, प्रधानमन्त्री नजिक हुन सक्ने अवसरका लागि पनि पार्टी खोलिन्छ । त्यो त तपाइँजस्तालाई थाहै हुनुपर्ने होला नी ।”
राजनीतिमा कुन बेला कसको एजेन्डा बलियो हुने हो त्यसको ठेगान भने हुँदैन । “आन्तरिक र बाह्य शक्तिको ताकत जुनबेला जसलाई प्राप्त हुन्छ त्यसले भूमिका खेल्ने मञ्च पो राजनीति हो ” तिनले थपे ।